အဆိုပါ U.S ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ပြီးတော့ Discovery. (အပိုင်း 1782)
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / အဆိုပါ U.S ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ပြီးတော့ Discovery. (အပိုင်း 1782)
24/11/2013 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
U.S. ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာရန်၎င်း၏အမြစ်များနှင့်ပတ်သက် 1789 တရားစီရင်ရေးအက်ဥပဒေ, အရာဥပဒေရေးရာသမိုင်းပညာရှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဥပဒေပြုတဲ့ညံ့ဖျင်း-ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ညံ့ဖျင်း-ပဋိသန္ဓေ ယူ. အပိုင်းအစအဖြစ်ရှုမြင်.
U.S ၏အဆိုးဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုမှာ. တရားစီရင်ခြင်း, အများအပြားရှိပါတယ်, ယင်း၏ရယ်စရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်, အရာပေးထားသောအငြင်းပွားမှုရမ်းအတွက်အခြေခံကိစ္စများထက် ပို. အလုပ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်ဝေးလွန်းအများကြီးဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်, U.S ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချ. တစ်တွားဖို့အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း, နှင့်ချဉ်းနီးပါးဘယ်တော့မှထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့ငါးဖမ်းလေ့လာရေးခရီးသွားအတွက်ရရှိလာတဲ့ “ဆေးလိပ်သောက်သေနတ်” ပါတီများရှာကြသည်. U.S. ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတင်သွင်းခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်အခြေချထဲသို့ဆန့်ကျင်ပါတီရိုက်နှက်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကလပ်အဖြစ် ပို. အသုံးဝင်သည်, နောက်ခံအမှန်တရားအဆုံးအဖြတ်များအတွက် tool အဖြစ်ထက်, ထိုသို့မရှိသလောက်တရား၏အကျိုးစီးပွားတာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါဟာဥပဒကုမ္ပဏီများအဘို့အသိသာတန်ဖိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ပေမယ့်.
အချို့သောဘုံဥပဒတရားစီရင်မှုအတွက်ထက်ဝေးလျော့နည်းကျယ်ပြန့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစရာရှိသောကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိလျင်မြန်ခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအားထက်လျော့နည်းစျေးကြီးဖြစ်စဉ်းစားသည်အဘယ်ကြောင့်သော့ကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာအတိအကျဖြစ်ပါတယ်. ဤသည် ပို. ပို. များကြောင့် U.S မှထိခိုက်ပျက်ပြားစေလျက်ရှိသည်. ပုဒ်မ၏တရားစီရင်ရေးရဲ့ပွဲတစ်ပွဲချို့ယွင်းချက်အနက် 1782, အောက်ကဆောင်းပါးထဲမှာကရှင်းပြသည်အဖြစ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရားရုံး-မိန့်ထုတ် Discovery နိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိလက်အောက်တွင်မှပါတီများအားဖြင့် 28 USC § 1782
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင်, ဘယ်လ်ဂျီယံအနုညာတစီရင်, အိုက်စလန်အနုညာတစီရင်, အီတလီနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ခွင့်အာဏာ, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်